Habka kumbuutarada Sony oo la weeraray - iftineducation.com
Habka kumbuutarada Sony oo la weeraray
iftineducation.com – Hay’adda dembi barista ee Mareykanka, ee FBI ayaa ganacsatada Mareykanka waxay uga digeysaa burburka ka dhallan karo weerarada dhanka internet ka ah, kaas oo ay qaadeen burcad aan la garaneyn ee ah kuwa kumbuutarada jabsada.
FBI ayaa shirkadaha siisay macluumaadka softwareka loo adeegsaday weerarkan kaas oo sababikara in hard driverka kumbuutarka uu shaqeynwaayo ama shabakadaha oo dhan ay demaan.
Digniintan ayaa imaaneysa iyadoo weerar lagu qaaday shirkadda Sony, oo laga xaday filimaan aan weli la siideyn, hanaanka kumbuutarada shirkadaasi ayaana waxyeelo daran la gaarsiiyay.
Waxaa jiro warar la isla dhexmarayo oo aan la xaqiijin, kuwaas oo sheegaya in weerarkan dhanka internetka ah ee lagu qaaday Sony ay ku lug leedahay dowladda Wqooyiga Kuuriya.
Laanta dembi barista ee Mareykanka ee FBI ayaa digniinta u gudbisay ganacsatada, iyagoo siiyay warar lagu kalsoonaan karo oo ku saabsan Saftware-ka ay isticmaaleen burcaddan aan la aqoon, si shirkadaha ay isaga ilaaliyaan in hanaankooda kumbuutarada la weeraro.
Afhayeen u hadlay Sony ayaa sheegay inay baarayaan cidda jabsatay kumbuutaradooda.
Istuudiyaha filimada, ee qeybta madadaalada ee shirkada Sony, ayaa la demiyay kumbuutaradooda, qaar ka mid ah aflaan aan la dooneynin in la baahiyo ayaa laga xaday iyadoo internetka la adeegsanayo, kaddib markii duullaan culus lagu qaaday.
FBI-du ma aysan sheegin in xiriir ay leeyihiin digniinta ay soo saareen iyo weerarka lagu qaaday Sony.
Waxaa jiro eedo ah in dowladda Waqooyiga Kuuriya ay arrintan masuul ka tahay kaddib markii shirkadda Sony ay soo saartay filim laga sameeyay dowladdaasi, oo loogu talagay xilliga ciidda masiixiyadda, kaas oo ka hadlaya, “Maalgelinta aan la qarin ee argagixisada iyo ficillada dagaalka.”
Sheekada filimka ayaa ku bilaabaneysa Seth Rogan iyo James Franco, oo CIA-da u sheegaya in shirqool lagu dilo hogaamiyaha Waqooyiga Kuuriya.
Xukuumadda Pyongyang ayaa warqad u qortay xoghayaha Qaramada midoobey iyo Brack Obama oo ay u sheegayaan in filimkaasi la mamnuuco.
DAAWO SOMALILAND: Diyaarad ugu Horeysay ee Lagu Farsameeyay Hargeysa Oo Maanta La Tijaabiyey
Dhalinyaro badan oo Soomaali ah oo lagu qab qabtay hawlgal laga sameeyay Xerada Dhagaxley ee dalka Kenya